Iggy Pop dia miseho ara-dalàna ao amina kilasy fanaovana sary manokana | Famoronana an-tserasera
Ny fandinihana ny anatomia olombelona dia zava-dehibe amin'ny mpanao hosodoko sy mpanao sariitatra amin'ny fampiofanana azy ary koa amin'ny asany kanto iray manontolo. Ity fianarana ity dia tanteraka amin'ny alàlan'ny fandalovana studio studio izay ahafahantsika manao fampisehoana sary voajanahary modely izay mihetsika mandritra ny adiny iray na roa mba hanatontosana fivoriana fohy maharitra 3 minitra izay, fa ny tena laharam-pahamehana.
Iggy Pop dia mpanakanto tsy misy dikany mahazatra fa nahafaly anay tamin'ny mozikany nandritra ny taona maro izy ary izy dia iray amin'ireo mpitendry mozika tia manamarina, raha manandrana endrika vaovao amin'ity fitadiavana endrika fomba fiteny vaovao ity. Hany ka ny vatan'ity angano rock ity dia nampiasaina ho an'ny sokajy zavakanto iray izay nanakoran'ny mpanakanto 21 azy mitanjaka hanao sary voajanahary.
Ny fahatsapana nojerena mandritra ny adiny iray na roa ataon'ny vondronà mpianatra na mpanao hosodoko izay mifantoha amin'ny antsipirian'ny pose na ny làlan'ny hetsika dia zavatra tena mahafaly. Zavatra iray tadiavin'i Iggy Pop mihitsy tao anatin'ity tolo-kevitra avy ao amin'ny Museum an'i Brooklyn ity ary noforonin'ilay mpanakanto Jeremy Deller.
Ny sary noforonina nandritra ny fotoam-pianarana dia ho anisan'ny a fampirantiana efa antomotra amin'ny fararano 2016. Tolo-kevitra tsy nampoizina gaga tamin'ireo mpanakanto 21 izay nivory tamin'io andro io tao amina kilasy manokana toa an'i Iggy Pop izay nitafy lamba miboridana tanteraka ho loharanon'ny aingam-panahy ho an'ny mpianatra, mpanakanto ary ireo efa misotro ronono.
Kilasy notontosain'ny Mpanakanto anglisy Jeremy Deller ary notarihin'ny mpanakanto, mpanao sariitatra ary mpampianatra Michael Grimaldi. Manana ny tolo-kevitra iray manontolo ianao Instagram mihitsy an'ny Museum an'i Brooklyn hahafantatra ny fampiratiana amin'ny fararano amin'ity taona ity, raha teo ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Iggy Pop dia niboridana niboridana hanaovana kilasy fanaovana fiainana